आज धान्य एवं योमरी पूर्णिमा मनाइँदै, यस्तो छ परम्परा – Wow Sansar
December 30, 2020 89
काठमाडौँ । मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज धानको विधिपूर्वक पूजाआजा एवं दान गरी धान्यपूर्णिमा पर्व मनाइँदै छ । मङ्सिरमा धान भित्र्याएपछि शुक्ल पूर्णिमामा धान, गणेश, कुलदेवता, गैडु देवता, गोठ देवता, महारुद्र, महालक्ष्मीलगायत देवताको पनि पूजा गरी नयाँ भित्रिएको धान कुटेर चामल बनाउने त्यसबाट पीठो पिँधेर सेल, बाबर, पुरी मालपुवा बनाएर चढाउने परम्परा छ ।
कतिपय समुदायले भने आजै कूल परम्पराअनुसार दिवाली वा कुलदेवताको पूजा आराधना गरी धान्य पूर्णिमा पर्व मनाउँछन् । यसअघि नवअन्नप्राशन नगरेकाले आजै नवान्नप्राशन गर्नुपर्ने धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । आजको दिन यस अवसरमा काभ्रेपलाञ्चोकको धनेश्वर, भक्तपुरको अनन्तलिङ्गेश्वर, चम्पादेवीलगायत स्थानमा मेलासमेत लाग्दछ ।
नयाँ धान भित्र्याएको खुशियालीमा नेवार समुदायले आज योमरी पूर्णिमा हर्षोल्लासका साथ मनाउँदैछन् । योमरी पूर्णिमालाई योमरी पुन्हि पनि भनिन्छ । नेवार समुदायको ठूलो चाडका रूपमा मनाइने यस चाडलाई खाद्य पदार्थको रसिलो चाडको रूपमा पनि लिइन्छ । योमरी नयाँ धानबाट बनेको चामलको पीठो, चाकु र तिलबाट बनाइन्छ ।
योमरी बनाउन आज बिहान सबेरैदेखि घरका महिला व्यस्त हुने गर्छन् । नुहाइधुवाइ र घरमा लिपपोत गरी योमरी पकाउने प्रचलन छ । यो पर्वलाई नेवार समुदायले पनि नवअन्नप्राशनका रुपमा समेत मनाउने गरेको संस्कृतिविद् तेजेश्वरबाबु ग्वँग बताउछन् । योमरीमा दूधबाट बनेको खुवा र चाकु तथा तिलसमेत राखेर डल्लो बनाइन्छ ।
नेवार समुदायले पनि धान राख्ने भकारी वा कोठीमा पनि पूजा आराधना गरेर योमरी पूर्णिमा मनाउँछन् । गर्भवती भएका चेलीबेटीलाई गर्भमै बालकको पूर्ण स्वास्थ्यको कामना गर्दै माइतीबाट उनीहरूको घरमा तिल र चाकु भरिएको योमरी सगुन भनेर उपहार पठाउने चलन पनि छ ।
Prevप्रेम असफल भएपछी एनआइसी एशिया बैंकका कर्मचारीले बैंककै भवनमा गरे आ’त्मह’त्या ! (भिडियो)
Nextसर्लाहीमा एकै परिवारका तीन जनालाई फालामको सांग्लाले बाँधिएर राखिएको कुराको भयो पर्दाफास, कारण यस्तो रहेछ (भिडियोसहित)
आर्यघाटको छाना भत्किँदा मलामी गएका १८ जनाको मृत्यु, उद्धार कार्य जारी
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6768)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3351)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1135)
कञ्चनपुरकी यी युवतीले फेसबुकबाट केटासँग लब गर्दा काेठामा लगेर घीनलाग्दाे हर्कत गरी बनाईदिए यस्ताे बिजाेग.. (661)